RW-30kW miova rivotra dity turbine
RW-5kW miova rivotra dity turbine
RW-10kW miova rivotra dity turbine
Product Description nitondra Light Ny fitoeran-javatra 1.0 no flagship vokatra sy vaovao 2018 ivelan'ny trano-masoandro mazava ao an-tsaha herin'ny masoandro mazava. Ny fitoeran-javatra Light 1.0 maneho ny zava-baovao ao ivelan'ny trano disruptive jiro orinasa. Izany no iraka izay fanoloana ny jiro ivelan'ny trano nentim-paharazana amin'ny hoavy. Mahatsara azy ny Core 3.2V iray dreninao TOSIKARATRA endri-javatra ity dia manana fahazavana io dia afaka miasa tsara amin'ny ratsy ny andro toy ny orana na rahona andro, na ratsy hafa masoandro tontolo iainana. Ny tombontsoa Core roa bobongolo Made Prod ...
Ny fitoeran-javatra Light LED 1.0 no flagship vokatra sy vaovao 2018 ivelan'ny trano-masoandro mazava ao an-tsaha herin'ny masoandro mazava. Ny fitoeran-javatra Light 1.0 maneho ny zava-baovao ao ivelan'ny trano disruptive jiro orinasa. Izany no iraka izay fanoloana ny jiro ivelan'ny trano nentim-paharazana amin'ny hoavy.
Mahatsara azy ny Core One
3.2V dreninao TOSIKARATRA
ity endri-javatra dia manana fahazavana io dia afaka miasa tsara amin'ny ratsy ny andro toy ny orana na rahona andro, na ratsy hafa masoandro tontolo iainana.
Mahatsara azy ny Core roa
Bobongolo Made Product
famokarana fahombiazana ary hampitombo ny mikasika ny Fahasarotana.
Mahatsara azy ny Core Telo
Tsara Streamline-kevi-pitantanana Amin'ny Performance tsara kokoa. Noho ny bobongolo nanao vokatra, dia manana vatana streamline tsaratsara kokoa, izay mandray anjara amin'ny fampisehoana ny vokatra mety
The Core tombontsoa Four
Amin'ny alalan'ny fampiasana High Quality Material
Ny vatana ara-nofo no aluminium alloy.The mamaly ny singa dia monocrystalline silisiôma (A Grade) .Ny Lithium bateria izay ampiasaina ho an'ny herinaratra fiara fitateram-bahoaka no ao anatiny. Ny singa elektronika dia afaka tonga ny miaramila anivon'ny ..
Mahatsara azy ny Core dimy
Mamirapiratra nandritra ny alina manontolo
Mampanantena isika fa azo mazava long.Not ny alina tsy noho ny fampiasana fahaiza-manao lehibe sy avo lenta bateria-dehibe jiro LED, fa koa izahay, ary nanjary fikarohana ny manan-tsaina ny rafitra fanaraha-maso ny jiro. Afaka mizara ny residual herinaratra tamim-pahendrena kokoa ny hitandrina.
Ny fitoeran-javatra Light 1.0a (Solar hazavana eny an-dalana rehetra ao anatin'ny iray)
Nitarika :Nichia ( 20W, 2000lm )
Solar sela: monocrystalline silisiôma (30W)
Weight: 7.6 kilao
Karazana loko: mainty sy fotsy
Safety hafanana: -20 - 65 (centigrade)
Product fiainana:> 50000 (ora)
Lighting lojika: hery feno jiro ho an'ny voalohany 4 ora,
Ary rehefa afaka izany manan-tsaina jiro
Quality fanamarinana :am.fi, RoHS
Fampiharana: ivelan'ny trano \_ tetikasa \_ lalana \_ Toerana mahafinaritra toerana
Ny fitoeran-javatra Light 1.0b (Solar hazavana eny an-dalana rehetra ao anatin'ny iray)
Nitarika :Nichia ( 30W, 3000lm )
Solar sela: monocrystalline silisiôma (40W)
Weight: 7.8 kilao
Ny fitoeran-javatra Light 1.0c (Solar eny an-dalana mazava mivaky karazana)
Nitarika :Nichia ( 60W, 6000lm )
Solar sela: monocrystalline silisiôma (80W)
Weight: 10.5 kilao
Size :755 * 350 * 81( Lamp )+ 755 * 350 ( masoandro tontonana )
Lighting lojika: hery feno jiro ho an'ny voalohany 4 ora ,
Ny fitoeran-javatra Light 1.0d (Solar eny an-dalana mazava mivaky karazana)
Nitarika :Nichia ( 80W, 8000lm)
Solar sela: monocrystalline silisiôma (120W)
Weight: 13 kilao
Size :755 * 350 * 81( Lamp )+ 755 * 350 ( 2 masoandro tontonana )
Previous: RW-10kW miova rivotra dity turbine
Manaraka: RW-5kW miova rivotra dity turbine
Solar Hitany Lawn Light RNJ-CP-2W
Solar Hitany Plant Grow Light RNJ-ZW-50W
rivotra eny an-dalana mazava masoandro mifangaro
Solar Hitany Wall Light RNJ-SD-10W
Hitany Solar High Bay Light RNJ-GK-80W